Ahoana ny fomba hananganana asa atao amin'ny Digital Marketing? - Sekoly teknolojia
Ahoana ny fomba hananganana asa atao amin'ny Digital Marketing?
Ny fanaovana asa sy fananganana asa dia zavatra roa samihafa, manontany ny fresher, ny olona miasa, ny mpilatsaka an-tsitrapo, ny tanora tsy an'asa dia tokony hazava foana - na izy ireo no mitady an'i Joba na ny asa aman-draharaha? "Joba" Azo atao ny manao birao na manao asa amin'ny fotoana voafetra, ary isan'andro dia manao toy izany koa ianao ary eo am-pelatananao vola. fa "Asa" manao asa izay tianao ary mahazo valisoa amin'izany ianao ary hanome anao ny fahafahana hivoatra sy hivoatra tokoa izany. Satria tiako ny asa ary te-hanangana toerana iray ihany aho. Digital Marketing Course dia nanova ny fiainan'ny mpandray anjara maro.
Ary amin'izao fotoana izao amin'ny tambajotra Digital Media, raha te-hanao asa ianao na hanangana ny asanao izay mora amin'ny fampitahàna amin'ny lasa. Satria ao Mondial digital Afaka mahazo ny angon-drakitra goavana manerantany isika. Ary raha mbola tanora ianao dia tsy miasa, Housewife, mpianatra any amin'ny oniversite, mpivarotra na mpandraharaha mila ilainao nomena nomerika nomerika hivarotra na hanolotra ny serivisy.
Flipkart no nanorina tamin'ny 2007 tamin'ny bunch ny mpiasa sy ny tolotra voafetra - ankehitriny dia manana mpiasan'ny 30000 sy ny fividianana Rs. 15,129 crore, ary izy mivarotra ny entana amin'ny alalan'ny media dizitaly. Bilaogy - Amit Agrawal namoaka bilaogy tao amin'ny www.labnol.org ary nahazo Rs. 20 lacs amin'ny 30 lacs isam-bolana amin'ny alàlan'ny blaogin'ny IT teknika. Izy io dia herin'ny fampahalalam-baovao nomerika izay afaka mahazo vola amin'ny fizarana fahalalana.
Koa raha efa tsy tadidinao intsony ny bus - aza manao izany fa satria eto dia manome vahaolana momba ny teknolojia Innovative izay manolotra anao hanatevin-daharana ny lalao Digital Media, dia hahatonga anareo ho matanjaka amin'ny fahalalahan'ny fampahalalam-baovao nomerika izay azonao atao ny mikasa ny hamorona tranonkala, planina ho an'ny fanentanana ara-nomerika, media marketing ho an'ny mpanjifanao na ny vokatra avy amin'ny orinasa, Ampitomboy ny raharaham-barotra amin'ny alàlan'ny fampitam-baovao mediam-paritra amin'ny alàlan'ny famoahana lahatsoratra facebook, Instagram.
Digital career marketing dia tsara indrindra ho an'ny vehivavy mpivaro-tena (asa ho an'ny vehivavy mpivaro-tena, asa avy any an-trano) satria fantatsika fa manana andraikiny manokana toy ny fianakaviana, ny ankizy, ny asa an-trano ary ny maro hafa, saingy tsy manahy amin'ny tontolo nomerika tsy mila mandany ny talentanao , Ny sehatry ny mediam-pahitalavitra Digital dia hanampy anao hahazo ny fahalalana ilaina izay ahafahanao mampiroborobo orinasa any an-toerana, afaka mampiroborobo ny tombontsoanao ianao, afaka manoratra bilaogy momba ny sakafo, fomba hikarakarana ny ankizy, lesona kely momba ny foto-kevitrao. Maro ireo fahafaha-manao ho anao - ary inona no andrasanao hiaraka aminay - Dingana ara-barotra Digital ary ampisehoy ny talentanao ho mpandray vola ho an'ny fianakavianao.
Mpivarotra / Entrepreneurs / manomboka - Ny fanamby lehibe indrindra dia ny midika hoe iza no afaka manakarama izay afaka manao dokam-barotra nomerika ho an'ny tenany, ahoana ny fomba hijerena izay ataon'izy ireo, moa ve izy ireo manao ny marina na tsia, inona ny ROI amin'ny marketing, mahazo tombony aho na tsia - eny, misy fanontaniana maro tsy voavaly, tsy mila manahy - afa-mamonjy ora vitsy amin'ny fotoananao ary mianatra ny mediam-pampitam-baovaom-pahitalavitra, hahatakatra ny raharaham-barotra ataonareo ny manam-pahaizana ary hanampy anao hanangana tetikady ho an'ny marketing marika.
Tanora tsy nasaina - Manana asa sarobidy foana ny ordinatera, saingy ny olana dia rehefa tsy mianatra amin'ny ordinatera ianao, noho izany dia aza manahy - raha mianatra lesona tsy misy ordinatera toy ny BA, BCOM, BSC ianao ary mbola maniry ny hanorina asa amin'ny Computer, eto dia dia manome fahafahana anao hanao izany. Ny 1000 amin'ny asa izay mipetraka tsy misy vidim-boka mitady ireo mpanazatra momba ny varotra dizitaly, miaraha aminay Fampahalalam-baovao mediam-bahoaka nomerika mba hanana asa mivoatra ao amin'ny marketing mediam-pahitalavitra.
BBA / MBA / mpiasa matihanina amin'ny varotra - Fantatrao fa tena sarotra ny miteraka lozam-piaramanidina mena, sarotra ny manazava ny tombontsoa azo avy amin'ny vokatra, sarotra ny manala ny mpanjifanao amin'ny serivisy, ary azo antoka fa tsy maintsy mampiasa PowerPoint, fanolorana, mailaka, antso mangatsiaka, varavarana Ho an'ny mpivarotra, dia mampiseho sarotra ny asam-barotra, ary azontsika antoka fa fantatrao hoe iza no mpanjifanao, izay jeografia, izay sokajin-taona, izay maha-lahy sy vavy, ny fandoavana fahafaha-manao sy ny marimaritra iraisana, ary raha manome safidy an-tsika isika amin'ny fametahana dokam-barotra Asio marika isaky ny parameter - tsy eritreretinao hoe ho lehibe izany! Eny, azo atao izany ho an'ny tontolo dizitaly Digital, ka mieritreritra izay tokony hataonao ianao, asa mafy na asa matotra.
Tohizo ny GOAL amin'ny fianarana Hafanàm-po an-barotra avy amin'ny vahaolana teknolojia vaovao.
Nahoana ianao no te-tezitra ny WiFi?
9 IT Courses Tokony hanao mpianatra ny mpianatra rehefa avy nandalo fanadinana 2017 12th Board